बुहारी सिर्जना त्रिपाठीलाई प्रचण्ड निवासमा प्रवेशनै निषेध भनेपछि दीईन मुखभरिको जवाफ ! – AB Sansar
बुहारी सिर्जना त्रिपाठीलाई प्रचण्ड निवासमा प्रवेशनै निषेध भनेपछि दीईन मुखभरिको जवाफ !
January 16, 2021 Ab-संसारLeaveaComment on बुहारी सिर्जना त्रिपाठीलाई प्रचण्ड निवासमा प्रवेशनै निषेध भनेपछि दीईन मुखभरिको जवाफ !
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) मा देखिएको विग्रहपछि हरेक नेता/कार्यकर्ता दुई ध्रुवमा विभाजित भएका छन् । पुर्व माओवादी, माधव नेपाल, झलनाथ खनालसहितका नेता/कार्यकर्ता एउटा समुहमा छन् भने केपी शर्मा ओलीसहितका नेता/कार्यकर्ता अर्को समुहमा छन् । राजनीतिक रुपमा पार्टीमा फुट आएपछि दुवै पक्ष एकअर्कालाई न’ङ्ग्याउन जिउ छोडेर लागेका छन् । राजनीतिक विषयलाई ब्यक्तिगत जिवन शैली, पारिवारीक सम्वन्ध र स्वास्थ्यसँग समेत जोडेर निकृष्ट गा’लि गर्ने प्रवृत्ति झाङ्गिएको छ । यसमा कार्यकर्ता मात्र होईन, शिर्ष नेतृत्व नै अग्र पंक्तिमा देखिएका छन् । ****** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला*****
विवाह गरेर लाइफ म्याʼनेज भयो भन्दै आएका भाइरल बाबाको विवाह के भयो ? श्रीमतीका बारेमा सोʼध्दा दिए यस्तो जवाफ-हेर्नुस् (भिडियो सहित कुराकानी )
प्रेमीलाई सुटकेसमा कोचेर जे’लवाट भगाउम खोजिन प्रेमिका….
अहिलेको सरकार लोकतान्त्रिक बाटोबाट हैन, अपवित्र गठबन्धनबाट बनेर आएको हो : केपी ओली !!
नेपाल-भारतको फुटबल हेर्न एमाले अध्यक्ष ओली पुगे दशरथ रंगशाला